Gas (လေထခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gas (လေထခြင်း)
Gas (လေထခြင်း) ကဘာလဲ။
သင့်အစာအိမ်နှင့်အူများမှ အစာများအား စွမ်းအင်ဖြစ်အောင်ခြေဖျက်သည့်အခါ ဓါတ်ငွေ့များထွက်လာပါသည်။ လူတိုင်း လေလည်ကြသည်။ တစ်ချို့မှာ သူများထက်ပိုလည်ကြ၏။ ဆိုရလျှင် တစ်ရက်ကို ၆-၂၀ ကြိမ်ခန့် လေလည်ခြင်းက ပုံမှန်ဟုဆိုနိုင်သည်။ အစာခြေစနစ်တစ်ခုလုံး အစာအိမ်မှ အစာဟောင်းအိမ်ထိ မျိုချခြင်း အစာခြေခြင်းမှ လေများရှိနေပါသည်။
တစ်ချို့သောအစာများ ဥပမာ ပဲကြီးသည် အူမကြီးသို့ရောက်မှသာ အစာလုံးဝကျေသည်။ အူမကြီးတွင် ဘက်တီးရီးယားများက ပဲကြီးများကို အချဉ်ဖောက်ကြပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အူတွင်းဓါတ်ငွေ့များခြင်းက အစာခြေစနစ်ရောဂါတစ်ခုကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လူတိုင်းဆိုသလို တစ်ရက်လျှင် အကြိမ်များစွာ လေလည်ကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ လေလည် လေချဉ်တက်ခြင်က ပုံမှန်သာဖြစ်ပါသည်။
Gas (လေထခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Gas (လေထခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လူအများစုအတွက် လေထခြင်းနှင့် လေအောင့်ခြင်းလက္ခဏာများမှာ အလွန်သိသာလှသည်။ ၎င်းတို့မှာ –
ကိုယ်စိတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း စိတ်နှင့်ထိန်းနိုင်ခြင်းမရှိပဲသော်လည်းကောင်း လေချဉ်တက်ခြင်း သို့ လေလည်ခြင်း
ဗိုက်တွင် စူးစူးဝါးဝါးထိုးအောင့်တတ်ခြင်း၊ နာကျင်မှုမှာ ဗိုက်၏ဘယ်နေရာမှမဆို ပေါ်လာနိုင်ပြီး နာသည့်နေရာလည်း မြန်မြန်ပြောင်းနိုင်သလို မြန်မြန်လည်း သက်သာသွားတတ်ပါသည်။
ဗိုက်အတွင်း ပြည့်ကယ် လေးပင်နေခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံ၌ နာကျင်မှုမှာ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတတ်ပြီး ပြင်းလွန်းသောကြောင့် တစ်ခုခုပြဿနာဖြစ်နေသလို ထင်ရနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒီလိုလေပွခြင်းက အောက်ပါတို့နှင့် မှားနိုင်ပါသည်။
မကြာခဏ သို့မဟုတ် တောက်လျှောက် ပျို့ခြင်း သို့မဟုတ် အန်နေခြင်း
Gas (လေထခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လေမျိုချခြင်း – မျိုချသောလေများ ပြန်တက်မလာလျှင် အစာခြေလမ်းကြောင်းထဲသို့ရောက်သွားပြီး လေလည်ခြင်းအဖြစ် ထွက်သွားပါလိမ့်မည်။ လေများများမျိုချခြင်းက ကျို့ထိုးစေတတ်ပါသည်။
အစားနှင့်သောက်စရာများ – အစာမျိုးမျိုး လေထစေတတ်သည့်ပမာဏမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူပါ။ ထို့အတူ အနံ့မှာလည်း ကွဲပြားပါသေးသည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်း – ၎င်းက ဗိုက်ကယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် လေမထတတ်ပါ။
ဆေးနှင့် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ – အလွယ်ဝယ်နိုင်သည့်ဆေး သို့မဟုတ် ဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမှဝယ်လို့ရသည့်ဆေးများ ဖြည့်စွက်စာများမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် ဗိုက်ကယ်ခြင်း လေထခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
အူပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် Crohn’s disease လို ရောဂါများ
ဟော်မုန်းလယ်ဗယ်ပြောင်းခြင်း။ ရာသီမလာခင် ဗိုက်ကယ်ခြင်းကို အမျိုးသမီးများ အသိများကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအချိန်မှာ သူတို့ခန္ဓါကိုယ်များသည် အရည်များကို ထိန်းထားရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Gas (လေထခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လက်တို့စ် သို့မဟုတ် ဂလူးဂို့စ်နှင့် မတည့်ခြင်း
သစ်သီး၊ ဟင်းရွက်များ၊ ဂျုံကြမ်းများနှင့် ပဲတောင့်ရှည် စသည့်အစာများ အစားများခြင်း
ဝမ်းဗိုက်တွင် irritable bowel syndrome သို့မဟုတ် inflammatory bowel disease လို နာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်နေခြင်း
Gas (လေထခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ လေပွလေနာရသည့်အကြောင်းရင်းကို အောက်ပါတို့အပေါ်အခြေခံပြီး အတည်ပြုပါလိမ့်မည်။
စမ်းသပ်ရာတွင် ဆရာဝန်သည် ဗိုက်ဖောင်းနေခြင်းရှိမရှိ ကြည့်ခြင်း လက်နှင့်ခေါက်ပြီး လှိုဏ်သံကိုနားထောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ လှိုဏ်သံမှာ လေအတော်ပွနေခြင်းကို ပြညွှန်ပါသည်။
Gas (လေထခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အောက်ပါအတိုင်း အစားအသောက်ပြောင်းလိုက်ခြင်းက လေပမာဏကို နည်းစေပြီး မြန်မြန်ရွေ့သွားစေရန် အကူအညီပေးပါသည်။
သင့်ကိုလေထစေသည့်အစာများကို မှတ်ထားပြီး ရှောင်ပါ။
ဆီကြော်မုန့်နှင့် အဆီများကို ဖြတ်ပါ။
ခဏတာလောက် အမျှင်များသည်များကို ဖြတ်ထားပါ။
အမျှင်ဖြည့်စွက်စာများကို အလွန်အကျွံမလုပ်ပါနှင့်။ ကိုယ်စားသည့်ပမာဏကို ပြန်ချိန်ပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးသွားခြင်းမျိုးသာလုပ်ပါ။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများစားသုံးခြင်းကိုလည်းလျော့ပါ။ နွားနို့အစား လက်တို့စ်နည်းသည့်အစာများ ဥပမာ ဒိန်ချဉ်ကိုသာစားပါ။ သို့မဟုတ် လက်တို့စ်ကိုခြေဖျက်နိုင်မည့်ဆေး Lactaid သို့မဟုတ် Dairy Ease များသုံးပေးပါ။
တစ်ချို့ဆေးများမှာ အထောက်အကူဖြစ်သော်လည်း အားလုံး ကောင်းပါသည်ဆိုသည်မျိုးတော့မဟုတ်ပါ။
Beano – ပဲကြီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များချက်လျှင် Beano ကိုထည့်ခြင်းက လေထသည့်ပမာဏကို နည်းစေပါသည်။
Lactase ဖြည့်စွက်စာများ – Lactase အင်ဇိုင်းများ (Lactaid, Diary Ease) ဖြည့်စွက်စာများမှာ လက်တို့စ်အားခြေဖက်ရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေပါသည်။ လက်တို့စ်နှင့်မတည့်သူအတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။
မီးသွေးဆေး – မီးသွေးဆေးပြား (CharcoCaps, Charcoal Plus, စသည်) တို့ကို အစာမစားခင်နှင့် စားပြီးနောက်သောက်ပေးလျှင်လည်း အကူအညီရပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လေထခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လေထခြင်း ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
အစာကိုခွဲခွဲစားပါ – လေပွစေသောအစာများမှာ နေ့စဉ်စားနေကျ ကျန်းမာစေသည့်အစာများတွင် ပါနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစားကို နည်းနည်းစီခွဲစားပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ်တွင် လေပွမပွ စောင့်ကြည့်ကြည့်ပါ။
ဖြည်းဖြည်းစားပါ – ကြေညက်အောင်ဝါးပါ။ အငမ်းမရမစားရ။ စားသည့်အရှိန်မလျော့နိုင်ဘူးဆိုပါက တစ်လုပ်စားပြီး ဇွန်ကိုချပစ်ပါ။
ပီကေဝါးခြင်း၊ ချိုချဉ်စုပ်ခြင်း၊ ပိုက်နှင့်သောက်ခြင်းများကိုရှောင်ပါ။ ၎င်းတို့မှာ လေကိုပိုမျိုချမိစေနိုင်ပါသည်။
သွားတုများတပ်ထားလျှင် စစ်ပါ။ သေချာပုံစံမကျသော သွားတုများမှာ အစားအသောက်စားရာတွင် လေများကို ပိုမျိုမိစေတတ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ စီးကရက်သောက်ခြင်းမှာ လေမျိုမိသည့်ပမာဏကို ပိုများစေပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းက အစာခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လေများကို ကောင်းကောင်းရွေ့လျားစေနိုင်ပါသည်။
Intestinal http://www.mayoclinic.org/symptoms/intestinal-gas/basics/when-to-see-doctor/sym-20050922. Accessed April 1, 2017
Gas and gas pains http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gas-and-gas-pains/basics/lifestyle-home-remedies/con-20019271. Accessed April 1, 2017
Gas (Flatus) - Topic Overview http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/gas-flatus-topic-overview. Accessed April 1, 2017